I-Kdenlive 19.04 ikhutshwe namhlanje kuLuphi uhlaziyo olukhulu | Ubunlog
NgoLwesine odlulileyo, kanye emva kokukhutshwa kwe-Ubuntu 19.04 Disco Dingo, sipapashe inqaku elilumkisa ngale nto. Ngapha koko, sinike isaziso ngaphambi kokuba ukukhutshwa kwabo kube semthethweni, okuhambelana nokuhlaziywa kwamaphepha abo ewebhu. Kwi inqaku, iposwe ngumncedisi, ividiyo ifakiwe kwaye le vidiyo incinci yahlelwa nayo IKdenlive. Yayiyividiyo yokuqala endayihlelela ngaphaya kokuvavanya isoftware kwaye kufuneka nditsho ukuba, nangona ingeyona inomdla emhlabeni, isebenza ngokugqibeleleyo.
Emva kokuyisebenzisa, ndiye ndabaqonda abo bebekwicala leKdenlive ngaphezulu kweOpSShot. Ngapha koko, ndawuthanda umboniso wesibini ngcono kwaye ndaqala ukwenza ividiyo nge-OpenShot, kodwa yaphazamiseka xa ithumela kwelinye ilizwe kwaye andazi ukuba ndiza kuyizama na (ayinazingxengxezo). Namhlanje, uluntu lwe-KDE lwalonwabile ukwazisa ukukhutshwa kweKdenlive 19.04, uguqulelo, phakathi kwezinye izinto, ijongeka ngathi izakwenza ukuba umhleli asebenzise ngokulula kwabo bethu basebenzise isoftware elula.
1 IKdenlive 19.04, kungekudala kwii-repositories ezisemthethweni
1.1 Yintoni entsha kolu hlobo
IKdenlive 19.04, kungekudala kwii-repositories ezisemthethweni
Ngaphambi kokuba siqale ukukhankanya iindaba ezibandakanyiweyo kule nguqulo intsha, kuya kufuneka sikhumbule into endala kwakhona: ukumiliselwa kusemthethweni, kodwa kunjalo oko akuthethi ukuba sinokuyifaka ngendlela elula kwiPC yethu. Oko kuthetha ukuba sinokuzikhuphelela kuyo AppImage okanye kuhlobo lwayo Flatpak, kodwa hayi kwiindawo zokugcina ezisemthethweni zalo naluphi na uhambiso lweLinux. Into eyothusayo yile iphepha lolwazi yokukhutshwa ngokusesikweni namhlanje ikhankanya ukuba ikhutshiwe kwaye weposi Uluntu lwe-KDE luthi iqela laseKdenlive liyikhuphe namhlanje, kodwa umhla ovela kwiFlathub ngo-Epreli 18. Ngayiphi na imeko, ukukhutshwa okusemthethweni namhlanje ukuba simamela uluntu lwe KDE.
Yintoni entsha kolu hlobo
Umda wexesha omtsha ohlaziyiweyo: Bayitshintshile indlela yexesha elisebenza ngayo. Ingoma nganye inesandi okanye isandi kwaye iya kwamkela kuphela ividiyo kunye nesandi ngokwahlukeneyo. Xa usongeza ividiyo, iingoma ziya kwahlulwa ngokuzenzekelayo.
Uyilo olulungelelanisiweyoIingoma zinokuphinda zenziwe umlinganiso ngokwahlukeneyo.
Ukuhamba kwekhibhodi: ngoku singahambisa izinto ngekhibhodi ngokukhetha ividiyo kwaye sisebenzise ukhetho "thatha inqaku langoku". Eminye imisebenzi ikwafumaneka kwikhibhodi.
Ukuphathwa kwesakhelo esiphambili kuphuculwe.
Ukurekhodwa komsindo, eya kusivumela ukuba sivelise kwakhona iprojekthi kwaye sibhale phantsi into ngexesha lokwenyani.
Ezinye izinto ezintsha ziyafumaneka apha.
Ndandisele ndiqinisekile ngeKdenlive ngaphambi kwenguqulo yayo ye-19.04 kwaye ndinokuthi kuphela ukuba ndikhangele phambili ukuzama ingxelo elandelayo. Ndiza kulinda, mhlawumbi phakathi evekini, ukuyifaka. Kwaye wena?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » I-Kdenlive 19.04 ikhutshwe namhlanje kolona hlaziyo luphambili